Kukhalwa ngamaphoyisa aShanelayo | IOL Isolezwe
Kukhalwa ngamaphoyisa aShanelayo
Isolezwe / 10 December 2012, 11:12am /
AMAVENI yiwona athutha abantu abaningi ezitolo zakwaSqumbe njengoba amatekisi eshoda emuva kokutshalwa kwamaphoyisa kashanela. Ungqongqoshe uthe isimo sisazoba njena kuze kube uthola isixazululo enkingeni yamatekisi ahambela eMandeni.	Isithombe: SANDILE MAKHOBA
BAKHALA ngamaphoyisa kashanela abantu bezindawo ezakhele izitolo zakwaSqumbe,eMandeni emuva kokuhoxiswa kwamatekisi amaningi kule ndawo.
NgoLwesihlanu abantu bebemi ujenga belinde amabhasi emuva kokuthenga ezitolo zakwaSqumbe.
Abakhulume nethimba leSolezwe bathe sekuphele inyanga amatekisi aboshwa nguphiko lukaShanela eMandeni kanti kunamabhasi amabili kuphela ahambela kwaHlomendlini, eVutha naseMacambini.
“Uma size edolobheni sesihlala usuku lonke ngoba ngamatekisi amane asebenzayo namabhasi amabili ahambela ezindaweni ezahlukene. Abaya kwaHlomendlini bahamba ngebhasi kuthi abaphuma koShowe nakwezinye izindawo bathuthwe ngamaveni. Sesikhathele yilento kashanela,” kusho abesifazane akade beserenke.
Amaveni yiwona abonakale edla kahle kwazise amanye abemi eduze komnyango wesitolo sokudla ebathutha khona abantu namagilosa abo.
Banxuse uNgqongqoshe wezokuThutha uMnuz Willies Mchunu ukuba angenelele kulolu daba ngoba amaholidi abo kaKhisimusi azoba muncu uma kuqhubeka kanje.
UMnuz Kwanele Ncalane okhulumela lo mnyango uthe uNgqongqoshe ujube amaphoyisa kaShanela eMandeni ngemuva kokuthola izikhalazo zokushayisana phakathi kukasoseshini nokufakwa kwezimoto ngendlela engekho emthethweni.
Uthe kuyimanje ungqongqoshe wenza uphenyo olunzulu ngohlelo lokusebenza kusoseshini waseMandeni kanti amaphoyisa kashanela ayaqhubeka nomsebenzi wokubheka izimoto ezingekho emthethweni.
“Sesibophe izimoto ezingu-70 selokhu kuqale lolu hlelo ngoba zingenazo izincwadi zokusebenza emgwaqweni. Ezinye azikho sesimeni sokusebenza kanti nabashayeli bazo abanazo izincwadi zokuthwala umphakathi. Lokhu kwenzelwa ukuthi kube nozinzo,” kusho uNcalane.